Iintlobo ze-Gymnastics, ukusuka kwi-Artictic to Rhythmic
I-Gymnastics ingaphezu kwesigxobo kunye nomgangatho
Xa ucinga nge-gymnastics, unokucinga malunga nabantu abahamba nge-4-intshi-wide bram, izidumbu eziwela phantsi ngaphantsi okanye amadoda enza izinto ezinamandla zamagceke.
Kodwa loo mifanekiso imele imele iindidi ezahlukeneyo, ezichazwe ngokuqhelekileyo ze-gymnastics. Kukho ngokwenene iintlobo ezisixhenxe ezisemthethweni ze-gymnastics. Nasi ukujonga kubo:
I-Gymnastics yobuGcisa bamaTyhini
I-gymnastics yobugcisa bebhinqa (edlalwa ngokukhawuleza nje "kwi-gymnastics yabasetyhini") inomtsalane abathathi-nxaxheba kwaye ngokuqhelekileyo luhlobo oludumileyo lwe-gymnastics.
Kwakhona enye yetikiti zokuqala ukuthengisa ngaphandle kweMidlalo yeOlimpiki.
Iziganeko: Kwi-gymnastics yobugcisa besetyhini, abadlali baqhubisana ngezoxhobo ezine (i- vault , i- bars engalingani , ibhanki yokulinganisela kunye nokusebenzisa umzimba ).
Ukhuphiswano: Ukhuphiswano lwe-Olimpiki luquka:
Iqela: Abadlali abahlanu beqela. (Kwixesha elizayo, oko kuya kutshintsha ku-ezine kuphela.) Kwiziganeko zokuqala, abadlali abane banomncintiswano kwisiganeko ngasinye kunye nezibalo ezintathu zokubala. Ekugqibeleni, abagijimi abathathu banomncintiswano kwisiganeko ngasinye kwaye amanqaku onke kubalo lonke iqela.
Ngomntu wonke malunga-wonke: Umdlali uphumelela kuzo zonke iziganeko ezine kwaye amanqaku amaninzi ayongezwa.
Iziganeko zomntu ngamnye: Umqhubi weganeko ubizwa ngegama ngalinye kwisixhobo.
Jonga: Abahlali base-US base-US abafazi be-gymnastics yobugcisa.
2. Amadoda e-Gymnastics yobuGcisa
Olu luhlobo lwesibini oluthandwa kakhulu lwe-gymnastics e-United States kunye neyona ndlela endala kakhulu ye-gymnastics.
Iziganeko: Amadoda athuphisana ezintlanu zezixhobo: ukusetyenziswa komgangatho, i- horse hoom , namasongo, i-bar, imivalo ye-parallel kunye ne-bar engqamliyo (ngokuqhelekileyo kuthiwa ibha ephezulu).
Ukhuphiswano: Ukhuphiswano lwe- Olimpiki lubanjwe ngolu hlobo olufana ne-women's gymnastics yezobugcisa, kunye neqela, yonke indawo kunye nokukhuphisana komntu ngamnye. Ukwahlukana kuphela kukuba amadoda akhuphisana kwiziganeko zawo ezintandathu, kanti abafazi baqhubisana nabo kwiziganeko zabo ezine.
Jonga: Abahlali base-US base-US kwimisebenzi yezobugcisa
3. I- Gymnastics yeRhythmic
I-Gymnasts yenza i-jump, iphosa, ikhupha kunye nezinye ihamba kunye neentlobo ezahlukeneyo zezixhobo. Okwangoku nje imidlalo yowesifazane kuphela e-Olimpiki.
Iziganeko: Abadlali baqhubisana neentlobo ezi-5 ezahlukeneyo zezixhobo : intambo, i-hoop, ibhola, iiklabhu kunye ne-ribbon. Umgangatho womgangatho weso sihlandlo kumgangatho ophantsi okhuphiswano.
Ukhuphiswano: Kwii-Olimpiki, abadlali be-gymnast banomdla kwi:
Ngomntu wonke malunga-wonke: Umdlali ophangazelayo kwiintlanganiso ezi-zintlanu (nganye kwiminyaka emibini, esinye isisombululo sijikelezwa ngaphandle) kwaye amanqaku amaninzi ayongezwa.
Iziganeko zomntu ngamnye: I-gymnast ibizwa ngokuba yiqhawe kwizinto ezine ezikhoyo ngoku zijikelezayo.
Ukhuphiswano lweqela: Abahlanu bezemidlalo bazikhuphisana ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Ngenye indlela, bonke abadlali basebenzisa iifayili ezifanayo. Ngokwesiqhelo sesibini, abavocavoti basebenzisa izixhobo ezimbini ezihlukeneyo zezixhobo (umzekelo, abathathu bezemidlalo bazakusebenzisa ibhola kunye nabadlali abasebenzisa i-gymnasts baya kusebenzisa i-hoop).
Jonga: Ubuthathiswano bemihlaba ye-2014, ubuchule beqhinga lonke
Kwi-trampoline gymnastics, i-gymnasts yenza i-flips ephaphazelayo kwaye ijikeleza kuyo yonke into. Lo waba ngumyalelo we-Olimpiki kuma-Olympic ka-2000.
Ukongeza i-trampolinists kwisabelo esabelwe i-gymnastics, amaqela obugcisa ancitshiswa ukusuka kumalungu eqela elisixhenxe ukuya kweyithandathu.
Iziganeko: Imigaqo eqhotyoshelweyo kunye nokuzithandela zenziwa kwimincintiswano ye-Olimpiki. Ngamnye uqukethe izakhono ezilishumi kwaye zenziwa ngoluhlobo olufanayo lwe-trampoline.
I-Mini mini (i-gymnasts isebenzisa i-trampoline encinci, i-trampoline yamanqanaba amabini) kwaye ihambelanisiwe (abadlali ababili benza ngexesha elifanayo kwi-trampolines ezahlukeneyo) ziyimpikiswano yokhuphiswano eMelika, kodwa kungekhona kwi-Olimpiki.
Ukhuphiswano: I- Trampoline gymnastics iquka umcimbi ngamnye wabasetyhini kunye namadoda. Kukho isiganeko esifanelekileyo sokufikelela kwiindondo kodwa amanqaku ayithwali.
Jonga: I-Olympic trampoline ye-Olympic trampoline yama-2004, u-Yuri Nikitin (isandi asikho kwisiNgesi)
Ukwehla kwamandla kuqhutyelwa kwiprogram yomthombo wentshukumo ye-spring kuninzi kakhulu kunokuba umatshini wokusebenzisa umzimba usetyenziswe kwi-gymnastics yobuciko. Ngenxa yentwasahlobo yayo, abagijimi bayakwazi ukwenza izinto ezilukhuni kakhulu kunye neentshukumo ngokulandelelana.
Iziganeko: Zonke izityholo ezenziwayo zenziwa kwinqanaba elifanayo. Umgcovyi wenza iipasiti ezimbini kwinqanaba ngalinye lokhuphiswano, ezinezinto ezisibhozo kwisithuba ngasinye.
Ukhuphiswano: Isibambiso asikho umcimbi we-Olimpiki, kodwa inxalenye yeprogram ye-Junior Olympic e-United States kwaye ikhuphisana ngamazwe ngamazwe.
Jonga: I- Power falling to the nationals of Canada
6. I-Acrobatic Gymnastics
Kwi-acrobatic gymnastics, abadlali bazixhobo. Iqela elinamaqela amabini ukuya kwine-gymnast lenza zonke iindidi zezixhobo zokugcina izandla, zibamba kunye nezilinganiso komnye nomnye, ngelixa amalungu ekomiti aphonsela kunye nokubamba iqabane labo.
Iziganeko: Izinto zokuhlala zihlala ziqhutyelwa kumgangatho omnye wokusebenza.
Iziganeko ezikhuphisanayo zimbini zamadoda, amabini ngamabhinqa, iimbini ezidibeneyo, amaqela amabhinqa (abathathu-gymnasts) kunye namaqela omadoda (abane-gymnasts).
Ukhuphiswano: I- Acrobatic gymnastics ayikho umcimbi we-Olimpiki, kodwa inxalenye yenkqubo ye-US Junior Olympic kwaye ikhuphisana ngamazwe ngamazwe.
Jonga: I-montage ye-acro gymnastics kunye ne-acrobatic ye-gymnastics kukhuphiswano lwehlabathi ngo-2016
7. Iqela leGymnastics
I-gymnastics yeqela e-United States idla ngokukhuphisana phantsi kweGama iGym. Kwi-TeamGym, abadlali baqhutyana ndawonye kwiqela labafundi be-gymnasts abayisithupha ukuya kwezi-16. Iqela lingaba yinto-ibhinqa, yonke into-inkunzi okanye ixutywe.
Iziganeko: E-US, abathathi-nxaxheba kwi-TeamGym kukhuphiswano kwisiganeko sokuxhamla kweqela (ukusebenza kwi-fall, i-vault, kunye ne-mini-trampoline) kunye nokusetyenziswa komgangatho weqela.
Ukhuphiswano: I- TeamGym ayikho isiganeko se-Olimpiki, kodwa iyancintisana eMelika kunye nakwamanye amazwe kwiintlanganiso ezihambelanayo, kunye nemincintiswano yendawo, yesithili, yesizwe nakwamanye amazwe.
Jonga: Iqela le-Hawth gymnastics
Ubuninzi beSoccer Field Size kunye neMida
Indlela Yokuqalisa Isantya Sokuhamba
IP pool - Iibhilidi ezilishumi Iingcebiso zakho Abaphikisi bakho abazi
UkuQeqesha ukuGuquza kweGalati kuQinisekisa umgama wakho wokuqhuba
I-Ping-Pong okanye iTable Tennis: Yintoni echanekileyo?
Iintlobo ezisiNto zoNyaka zoPhulo lweeNkxaso
UMichael Vick Dogfighting Scandal
I-Ohio State University Admissions Statistics
I-Nirvana Biography kunye neProfayili
Isimo: Imfihlelo Enkulu!
Inkcazo Inkcazo, iiNyunithi, kunye nemizekelo
Inkcazo kunye nemizekelo yegama lesiNgesi
Ukuqulunqwa kwe-Delian League
Uphi uMthetho waMandla?
IziQinisekiso zeeNqanaba zoLungiso lwabaSebenzi
Iimvatho kunye ne-Marronage: Ukusinda koBakhoboka
Abasebenzi Bokuqala bathi i-Al-Jazeera iye yaba yi-propaganda Mouthpiece
Funda indlela yokudweba Inja kwiPencil Colors
Uphi uMthetho wePittman-Robertson?
I-Top 10 Disney Villains Yonke ixesha